काग तिहारको दिन यी वस्तु किन्दा मिल्छ लक्ष्मीको साथ ! राशि अनुसार के किन्ने के नकिन्ने ? – Chautari Online
November 11, 2020 1072
काठमाडौँ- पञ्चाङ्ग अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका अथवा काग तिहारका दिन धनवन्तरी त्रयोदशी अर्थात धनतेरस मनाउने गरिन्छ । धन त्रयोदशी र धनतेरस पनि यसै दिनलाई भन्ने गरिन्छ । यो दिन मूलतः आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरि र धनका देवता कुबेरको जन्मोत्सव मनाउने पर्व हो । धनतेरसका दिन नेपालको तराई क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ भाँडाकुडा र सुनचाँदीका गरगहना किनमेल गर्ने परम्परा रही आएको छ ।
धनतेरसको दिन सामानहरु किन्ने र दीपदान गर्ने दिन अर्थात् धनतेरस पर्व साथै काग तिहार पनि हो । काग तिहारको दिनमा प्रत्येक राशिका मानिसहरुले के किन्न हुन्छ र के किन्न हुन्न भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी रहेको छ । जानेर बुझेर खरिद गरे देखि लक्ष्मीले कहिले साथ नछोड्ने विश्वास पनि रहेको छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार धनतेरस भएको दिन कुन राशी भएकोले के किन्न हुने र नहुने तथा पूजा गर्ने बिधि तल विस्तारमा दिईएको छ ।
Prevफोक्सोलाई सफा गर्ने यी ९ चिज, थाहा पाउनुहोस् शरीरका लागि कति फाइदाजनक
Next०७७ कार्तिक २७ गते बिहिवार, ई.सं.२०२० नोभेम्वर १२ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य